အမေရိကန်စားသုံးသူများ၏ သဘောထားအခြေအနေဒေတာသည် နွေတွင်းကာလအတွင်း အလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့ပါသည်. ဇူလိုင်လတွင် ဒေတာကျဆင်းမည်ဟု ခန့်မှန်းထားခဲ့ကြသော်လည်း ၁၆နှစ်အတွင်း အမြင့်ဆုံးနှုန်းထားအထိ ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်. ယခုထုတ်ပြန်မည့်အချိန်တွင်တော့ အမေရိကန်သမ္မတ ထရန်၏ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပြသနာများနှင့် ကမ္ဘာ့အရေးအခင်းများကြောင့် ဒေတာကိန်းဂဏန်းများအခြေအနေ မည်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါသည်. ဒေတာကို စက်တင်ဘာ ၂၆ရက် ၁၇:၀၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်.
စားသုံးသူများ၏ သဘောထားအခြေအနေသည် အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုများ၏ သုံးစွဲမှုအခြေအနေများ အမေရိကန်စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထိုဒေတာထုတ်ပြန်မှုကြောင့် ငွေကြေးဈေးကွက်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာအလှုပ်အခတ်ရှိမှာ ဖြစ်ပါသည်.